September 29, 2019 September 29, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्ने मानिस रोगी बन्छ
मोबाइलबाट निस्कने एक प्रकारको विकिरणले मानिसको प्रजनन क्षमतादेखि स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्‍याउने गर्दछ । चिकित्सकका अनुसार मोवाइल फोनसँगै लिएर राति सुत्ने मानिसमा यसले नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । अहिलेको नयाँ प्रविधिमा आएका स्मार्टफोनबाट दर्जनौं खतरा हुने भएकाले राति सुत्दा मोवाइल सिरानिमा राख्न नहुने चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । चीनमा अनुसन्धानमा जुटेका चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले मोवाइलको ब्याट्रीबाट […]
android 10 new features: Android 10 सबै पिक्सेल फोनका लागि जारी गरिएको छ। Pixel 3, Pixel3XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 2, Pixel2XL, Pixel, र Pixel XL ले एन्ड्रोइड १० अपडेटहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्यो। प्रयोगकर्ताहरू ओभर एयर अपडेटको रोलको लागि प्रतिक्षा गर्न सक्छन् यदि उनीहरू चाहन्छन्। तपाईंसँग OTO अपडेट […]
September 20, 2019 khabarsansaarLeaveaComment on ह्याक भयो ट्वीटर सीईओको अकाउन्ट
ट्वीटरको संस्थापक एवम् हालका सीईओ ज्याक डोर्सीको ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ । चकल स्क्वाड नामको एक समूहले डोर्सीको अकाउन्ट ह्याक गरेको जिम्मेवारी लिएको छ । ज्याक डोर्सीको अकाउन्ट ह्याक गरेर ह्याकरले हिटलरको समर्थनमा ट्वीट गरेका थिए । स्वयं ज्याकमाथि नश्लीय टिप्णी गर्दै केही सन्देश पनि पोष्ट गरिएको थियो । अर्को एक ट्वीटमा ह्याकर्सले ट्वीटरको […]
छायांकनमा नजादै ‘एन्टी हिरो’को ओभरसिज राइट्स विक्री
September 19, 2019 September 29, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on छायांकनमा नजादै ‘एन्टी हिरो’को ओभरसिज राइट्स विक्री
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही ब्यानर र केही कलाकारको चलचित्रलाई लगानी उठाउन समस्या छैन । कलाकारले आफ्नो ब्रान्ड बनाउने हो र ब्यानरलाई दर्शकले पत्याउने हो भने लगानीकर्ता सुरक्षित हुन्छन् । तिहारपछि छायांकनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘एन्टी हिरो’ छायांकनपूर्व नै नाफामा जाने देखिएको छ । निर्माता भूवन केसीले यो चलचित्रको विदेश अधिकार पनि वेचेका छन् । जापानको […]
September 15, 2019 September 14, 2019 khabarsansaarLeaveaComment on फेसबुकले ‘डेटिङ’ सुरू, १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकाले चलाउन सक्ने
Facebook Dating App: फेसबुकले ‘डेटिङ’ एप ल्याएको छ। फेसबुक डेटिङ अब अमेरिका लगायत २० देशमा उपलब्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ब्राजिल, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, सिंगापुर, इक्वेडर, गुवेना, लाओस, मलेसिया, मेक्सिको, पारागुवे, पेरु, फिलिपिन्स, सुरीनाम, थाइल्यान्ड, उरुगुवे र भियतनाममा हाल उपलब्ध यो एप आगामी वर्ष युरोपमा लन्च हुने फेसबुकले जनाएको छ। यो एप १८ वर्षभन्दा […]
मोबाइल ह्याङ कसरी हुन्छ ?
September 14, 2019 khabarsansaarLeaveaComment on मोबाइल ह्याङ कसरी हुन्छ ?
मोबाइलका अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूको आकर्षण स्मार्टफोन तर्फ बढिरहेको छ । आइफोनमा आइअोएस र अधिकाशं अरू ब्रान्डमा एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा छन् । प्रयोगकर्ताहरूले स्मार्टफोनबाट जति सुविधा लिएका छन् बेलाबेलामा त्यत्ति नै हैरानी पनि पाउँछन्। स्मार्टफोन चलाउने तल उल्लेख गरेका समाधान र उपायलाई ख्याल गर्नु भयो भने तपाईँले ह्याङ हुने तनाब कम गर्न सक्नुहुन्छ । १. धेरै […]
फेसबुकले ‘लाइभ फिचर’ मा कडाइ गर्ने
September 6, 2019 September 29, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on फेसबुकले ‘लाइभ फिचर’ मा कडाइ गर्ने
जेष्ठ १, २०७६एजेन्सी सानफ्रान्सिस्को — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्नो लाइभ फिचरमा कडाइ गर्ने भएको छ । न्युजिल्याण्डमा भएको गोलीबारीको घटनाको विषयलाई लिएर फेसबुले लाइभ फिचरमा केही कडाइ गर्ने लागेको हो । गत मार्च १५ मा क्राईस्टचर्चको दुई मस्जिदमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली हानी ५१ जनालाई मारेको भिडियो फेसबुकमा लाइभ गरेपछि फेसबुकले यस्तो निर्णय आएको हो । […]
August 30, 2019 August 30, 2019 khabarsansaarLeaveaComment on फेसबुकले ल्याउँदैछ नयाँ मेसेजिङ एप
सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले एउटा नयाँ मेसेजिङ एपको निर्माणमा काम गरिरहेको छ । उक्त एपको माध्यमले प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो नजिकका साथीहरुसँग अधिक जानकारी शेयर गर्न सक्नेछन् । उक्त एपको नाम Threads हुने बताइएको छ । इन्स्टाग्रामको सिस्टम एपको रुपमा यो मेसेजिङ एपलाई फेसबुकले पेश गर्ने द भर्जमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । थ्रेड एपलाई यस्तो […]
August 27, 2019 August 30, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on रुकुमका मन्जितले बनाए हेलिकोप्टर
August 22, 2019 August 23, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on हत्केलाभित्र अटाउने ल्यापटप, एक ईन्चको स्क्रीन
विश्वको सर्वाधिक सानो ल्यापटप सार्वजनिक भएको छ । जुन ल्यापटपको स्क्रीन मात्र एक ईन्चको छ । पोल क्लिनगरले थिंक टिनी (Think Tiny) नाम दिएर यो ल्यापटप बनाएका हुन् । यो ल्यापटकलाई आईबीएमको थिंक प्याडको छोटो रुप भनिएको छ । यस सानो ल्यापटपमा एटीनी मिनी कन्ट्रोलको व्यवस्था छ । ल्यापटप चलाउन चार्जवाला व्याट्रीको व्यवस्था छ । […]
Last 365 Days Visits: 20,924